3D Iiprinta, Laser Machine, 3d nangokukrola-Ecubmaker
ITYYDIY 4in1 CNC
I-TOYDIY 4in1 3D Printer
Ifantasy Pro II
Incwadana ye-EcubWare 4.2.1
Yiba ngumthengisi kwakhona
Iimodyuli eziSebenzayo eziSebenzayo ezi-4
Isantya sokuprinta okuphezulu kunye nokuPrinta okuPhezulu
Kroba naziphi na iipateni, umfanekiso, uyilo lwezixhobo ezahlukeneyo
I-TOYDIY 4-in-1 3D Printer
Imibala emibini ye-3D Printing
Inkunkuma encinci yeFilitha kwaye akukhoMxube wokuDibanisa
Ukukrola, umphezulu weMill kwizixhobo ezahlukeneyo
I-8 Innovations yokuhlangabezana neemfuno zakho ezingenamkhawulo
Sinezinto zangaphambili ozifunayo
Imigangatho emine yePlatifti yeMagnetic eFudumeleyo
4-in-1 Slicing Software
Ubungakanani bePrinta eyi-180x180x180
Yintoni TOYDIY 4-in-1 3D Printer Ngaba Do
Imisebenzi engakumbi, ezinye iinketho zokujonga
Isiphumo seSpiderman 3D
Ithandwa luLuntu lwaBasebenzisi aba-5000
Emva kokufunda malunga nabanye abashicileli kwaye ndikwazi ukusebenzisa ezinye, ndixelela abantu ukuba le yeyona printa yokuqala ye-3D yokufumana kunye nokufunda, emva koko inyukele kwiprinta enkulu ukuba indawo yokwakha incinci kakhulu. lo matshini kakhulu.
Andimdala kakhulu ukuba ndingafunda izinto ezintsha!
I-ToyI YAMI e-4 kwi-1 isebenza kakuhle!
Iingalo zentaba zeGoPro zibuthathaka kancinci nge-15% ye-infill ngoko ke ndayinyusa ndaya kwi-50% ...
Ndifunde ukumisa kancinci ukuprinta kwaye nditeyiphe isihlenga phantsi njenge-inshurensi eyonyukayo yokubambelela ebhedini.
I-laser inxiba ngokwenyani indawo yam eyenziwe nge-iPad.
Nazi ezinye izixhobo ezincinci endizicwangcisileyo ndaza ndaziprinta: ulwandiso lweentambo ukuze ulubambe ngaphezulu kwiradiyetha. Ukuthambekisa okutsha kumela ikhibhodi yam. Itafile ekhangeleka ngokuhlekisayo yintlungu yemisipha kunye noxinzelelo lwexinzelelo, uthambisa indawo yenhlungu ngekona efanelekileyo yesitya.
Kufuneka ibhokisi yombane ejikelezileyo, phrinta nje enye. Umshicileli ushicilele isihlenga ngombala omnye ngokuzilayisha kunye nokukothula imfuno yefilamenti. Isiseko Magnetic kumnandi. Yonke into iyahlukana nje ngaphandle komzamo.
Imaski yobuso ilungile! Ndonwabile ukwenza into eluncedo ngeli xesha.
UJennifer Thorup Whitmer
Inkqubo entsha ye-laser yenza ukutshiswa okucocekileyo kunye nokucoca! Enkosi ngenkqubo ephuculweyo!
Ifama yeGoldens Junkyard
Ifike ngokukhawuleza yaza yatshintshwa. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngaphezu kwako konke ndiyakucela ndincede ndicinga ukuba ndingahle ndilahlekelwe yintloko enye ye-3d yentloko kwaye ndinqwenela ukuba bekukho izinto ezinzulu zokufunda ngokubhekisele kwicala lesoftware lezinto. Ndongeze olwam uphononongo kwiYouTube kwaye njengoko ubona intloko eyonqenayo yenza umsebenzi omangalisayo.
Bang on !! Nangona le yiprinta yam yokuqala ye-3D- andikadibani nemicimbi emininzi yokusebenza kuyo. Thatha nje iiyure ezininzi ukuze wazi malunga nemisebenzi emi-4 nganye nganye. Lwenzile lonke ushicilelo lovavanyo olunikiweyo kwikhadi le-SD. Kwaye xa sisonke ndinokuthi kuthulekile kunomdla.
Ngaphambi kokuya kwezinye iinkcukacha bendifuna ukukhankanya ukuba- inkonzo yabo yabathengi yayilungile. Ndadibana nabo ngokudideka ngexesha le-CNC yokugaya. Kwaye baphendula okomzuzwana ngeenkcukacha ezifanelekileyo. Ngumsebenzi omkhulu lowo!
Ukuza kuthi ga ngoku bendivavanya ukuprinta okuqhelekileyo kwaye ndikwisiqingatha sokuprinta iiyure ezingama-30. Umshicileli weza ngokukhawuleza evela e-amazon, kwaye wawupakishwe kakuhle. Akukho kwanto yomoshayo xa ndavula ibhokisi kwaye kwakulula ukuyikhupha. Into yayigqunywe ngogwebu ukunqanda nayiphi na intshukumo, kwaye zonke iintloko zazisongelwe kwiqamza. Kwakulula nokuvula.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo umhlobo wam osenyongweni uMolly ikati isweleke. Ndifuna ukumenzela isikhumbuzo esincinci kwaye ndisebenzise yonke imisebenzi emithathu yeToyDIY.
Ndikwazile ukusebenzisa lo mshicileli ngaphandle kwebhokisi ngaphandle kwemicimbi. Ndithenge le ngoFebruwari ka-2020 ukuze ndiyisebenzisele iiprojekthi zesikolo. Ndandingazi nto ngelo xesha malunga nokushicilelwa kwe-3D, i-laser etching okanye i-CNC yokukrola.
Ndinomcimbi kwinyanga enye okanye ngaphezulu kwi-3D yentloko eprintiweyo kwaye ndathunyelwa endaweni yoko ngokukhawuleza.
Inkampani iyakhawuleza ukuphendula imibuzo kunye nemicimbi ngexesha lomsebenzi e-China, ke kukho ukulibaziseka okuncinci kumaxesha okuphendula. Kodwa baphendula ngokukhawuleza bethathela ingqalelo umahluko wexesha.
Umshicileli omnandi kakhulu! Ukuza kuthi ga ngoku wenze ushicilelo lwe-filament enye, kodwa njengeevidiyo, layisha ifayile kwaye ucofe iqhosha. Emva koko ndiza kuzama umsebenzi we-laser.
Ndisoloko ndifuna umshicileli we-3-in-1 (ngokushicilela i-FDM, ukukrola kwe-CNC, kunye nokukrolwa kwe-laser) kodwa uninzi lwaba matshini lubiza kakhulu. Ke xa ndifumene umshicileli we-4-in-1 ebibiza kakhulu kunabanye, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiye kuyo kwaye ndibone ukuba ndicinga ntoni ngomatshini. Kwaye ndonwabile ngokuthenga kwam.
I-Ecubmaker 4-in-1 Printer iza ipakishwe kakuhle. Kukho iibhokisi ezincinci ezincinci, ezinelebheli ngaphakathi kwebhokisi enkulu- ngaphakathi kwezi bhokisi ungafumana izixhobo zentloko ezi-4, intambo, isiphatho sentambo, kunye nezixhobo / iinxalenye. Ngaphakathi kwebhokisi enkulu ungafumana umzimba womshicileli, osele uhlanganisiwe. Lo mshicileli ufuna indibano encinci- konke okufuneka ukwenze kukuncamathisela izixhobo eziyimfuneko kwaye uqale ukushicilela! Ngaphambi kokusebenzisa umshicileli, bendifuna ukuthatha ubunzulu bokujonga umshicileli kunye nolwakhiwo.
Ukusetyenziswa kwalo matshini kuninzi. Kungenxa yoko le nto ndiyithanda i-3DPrinter yam. Akudingeki ukuba ndikhathazeke malunga nomsebenzi we-4 esele unawo. Kwaye umgangatho wale misebenzi ulunge kakhulu.
Iimpawu zokulinganisa ngokuzenzekelayo zindinceda kakhulu ekubeni nengxaki yokushicilela. Iqonga alisoze lishushu ngenxa yetekhnoloji yokufunxa ubushushu. Ke ndinokukwazi ngokulula ukukhupha iPrinta yam ye-3D kanye emva kokuyigqiba.
Kwaye enye into ebaluleke kakhulu, ayifuni kudityaniswa, umatshini wokuqala wokudibanisa. Kule mihla bambalwa umatshini onika olu hlobo lwenkqubo.
Isoftware yokuyila ibonelela, ikwacebile kakhulu kumxholo. Ndinokuhlela ngokulula okanye ndiyile imodeli yam kunye nesoftware ye-ecubware.
Ndiza kucebisa wonke umntu ukuba athenge lo matshini, njengoko ungabizi kakhulu ngokuthelekisa uninzi lwenqaku langaphambili kunye nemisebenzi.
Usebenze kakuhle! Yonke into ifike kakuhle njengoko ibhengeziwe. Ukuza kuthi ga ngoku i-laser engraving most kwaye uyayithanda inyani yesiphumo kulo matshini mncinci. Ndizise intambo yomnyama phambi kokuba umshicileli wam athunyelwe. Okokuqala ukusebenzisa iziphumo. Ndiyathemba ukuba kuninzi onokukufumanisa kunye nokufunda.
Ukukhangela umshicileli we-3d ukuthenga usuku lokuzalwa lwonyana wam. Thatha iintsuku ezininzi ukuthatha isigqibo kwaye ekugqibeleni uzise le 4in1. Ngokwenene kufanelekile! Ndisebenze iiveki ezimbalwa ukuzama ukushicilela okungu-3d kunye nelaser ezinye zezitshixo zam zomthi. Ndifumene i-laser inomdla kakhulu ukuyisebenzisa, nangona ndiguqule umshicileli wam kwigaraji yam ukukhuselwa okongezelelekileyo!
Ndenze iprojekthi yam yokuqala kunye neToydiy 4in1. Ishicilelwe iinxalenye ezininzi kwaye ahlanganisene kunye. Nangona ukungaphumeleli kugqityiwe ngenxa yomcimbi oseto, kodwa emva kwencoko encinci nenkxaso yalungiswa. Ngokubanzi ndiyamthanda lo mshicileli.
I-Ecubmaker Setha isikhephe ukuzalisekisa iphupha laBenzi. Njengomnye wenkampani yokuqala ukuya phambili ekuphuhliseni i-Multi-functional 3D Printer, u-EcubMaker wancoma ubuchule bayo kunye nomgangatho osemgangathweni.
Ukusukela ukusekwa kwethu ngo-2013, Siphuhlisa uthotho lweeprinta ze-3D ezikumgangatho ophezulu njengeFantasy. Emva kokuphumelela kuthotho lweFantasy injongo yethu elandelayo yayikukukhulisa into enokuhlangabezana nesidingo sabadali abathanda ukuba nomatshini onokwenza imisebenzi emininzi. Kananjalo enokugcina imali kunye nexesha lokutshintsha umatshini uye kumatshini. Ekugqibeleni, safikelela kwithagethi yethu. Ngo-2019 Sazisa i-4-in-1 ye-3D Printer ebizwa ngegama: TOYDIY 4-in-1. Okubandakanya umbala owodwa we-FDM, umbala we-FDM ombala we-3D, ukukrola kweLaser, i-CNC yokukrola kunye nezinye izinto ezinobungcali.
Sinamalungu angaphezu kwe-10 kwiqela le-R & D. Bonke balandela iphupha lokuyila into yabathengi abaqhelekileyo ukuya kubathengi abaqhelekileyo. Bazimisele ukwenza into enokusetyenziswa ngumfundi waseKholejini. abazali abakwiminyaka ephakathi okanye ii-hobbits zomhlala-phantsi. I-TOYDIY 4-in-1 ngumzekelo ogqibeleleyo wokubonisa ukuzinikela kwabo. Ukuphuhliswa kwesoftware eyodwa kwisoftware kwakungumceli mngeni omkhulu kubo. Emva kokudlula kwinqanaba elinzima salwenza. Okwangoku i-TOYDIY sisixhobo esishicilelweyo esinezixhobo ezininzi ze-3D esiphumelela uninzi lwabathandi be-tech entliziyweni.
Ukuqhubeka neli galelo kushishino lokushicilela lwe-3D kunye nokuqhubela phambili kwayo sithenjisiwe ukuba siza kunika ikhulu lethu leepesenti. Sisebenza ukwenza ubomi bomsebenzisi ukuba bube lula ngakumbi nangakumbi. Sifuna ukuba uze nathi kwaye ube ngomnye wethu okholelwa kwizinto ezintsha kunye notshintsho kuluntu.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye neeKopi
© Copyright - 2014-2020: Onke amalungelo agciniwe.